Welcome to Aayaha Nolosha » SHEEKADII QURBACLEY
May 16, 2018 - Waxaa Qorey : Caaqil Dalmar -
Qurbacley waxey ahayd haweeney da’ ah oo ku xeeldheer duminta qoysaska iyo sida la isugu diro lamaanayaasha is qaba. Ragga degaanka oo dhan wey garanayeen Qurbacley iyo dhagarteeda sidaa awgeed nin kasta oo guursada wuxuu siin jiray qurbac si aanay afada ugu dirin reerkana u dumin.
Maalintii dambe ayaa waxaa guursaday nin dhallinyaro ah. Qurbacley ayaa u timid ninkii arooska ahaa iyadoo dooneysa qurbicii ay ka qaadan jirtay qoyska cusub hase ahaatee ninkii waa uu diiday in uu bixiyo qurbac.
Qurbacley wey iska tagtay iyadoo aan la murmin ninkii arooska ahaa, waayo, kalsooni ayay ku qabtay in ay heli doonto qurbac iyo ka badan.
Muddo ka dib, Qurbacley ayaa soo degtay meel aan ka fogeyn guriga ninkii u diiday qurbaca si ay isugu dirto isaga iyo.xaaskiisa. Isbarasho ka dib, Qurbacley ayaa maalin maalmaha ka mid ah weydiisay afada ninkii u diiday qurbaca inuu seygeedu aad u jecel yahay iyo in kale.
Xaaskii ayaa ugu jawaabtay, “qalbigiisa kuma jiri oo ma ogi inuu aad ii jecel yahay iyo kale.”
Qurbacley ayaa tiri, “Aniga ayaa kuu sheegaya qaab lagu ogaan karo inuu aad kuu jecel yahay ee waxaad yeeshaa, marka aad habeenkii wada ciyaartaan waxaad ka codsataa in uu kula ciyaaro mar labaad. Haddii uu kaa aqbalo wuu ku jecel yahay. Haddiise uu diido kuma jecla ee ogow.” Dardaarankaas ayay siisay weyna macsalaameysay.
Habeenkii markii lamaanihii is qabay ay kulmeen ayay gabadhii isla markiiba ka codsatay ninkeeda inuu ku laabto. Waa nin maanta oo dhan geel la jiray oo daallane, wuu diiday oo wuu iska seexday. Xaaskiina cuqdad ayaa gashay.
Ninkii ayaa waayay farxaddii iyo sheekadii xaaskiisa si kasta oo uu isugu dayay inuu qanciyana wey qanci weyday. Wuxuu ogaaday in ay dulmisay duqdii Qurbacley ahayd, sidaa awgeed iyadii ayuu raadiyay wuxuuna ka codsaday in ay reerka badbaadiso, isagana uu diyaar u yahay inuu bixiyo qurbacii la siin jiray.
Qurbacley ayaa u sheegtay ninkii in laga rabo 2 qurbac, midkii caadiga ahaa iyo mid ganaax ah, maadaama uu markii hore madax adeyg muujiyay. Ninkiina wuu aqbalay inuu bixiyo 2 qurbac.
Qurbacley waxey u tagtay xaaskii ninka waxeyna ka codsatay in ay duurka ku soo lugo baxsadaan. Markii ay muddo socdeen ayay ku tiri, “Naa aan kaadinno.” waa la kaadiyay. Haddana daqqiqad ka dib ayay Qurbacley tiri, “Naa aan kaadinno”. Afadii ninka ayaa tiri, “”Kaadiba ima heysee inteen ka keenayaa.”
Qurbacley ayaa tiri, “Nacas yahay ragguna waa sidaas oo kale, haddii ay u tagaan xaasaskooda isla markiiba kuma laaban karaan. Waa in ay muddo nastaan. Sidaa awgeed been ayaan kuu sheegaye reerkaaga dhaqo.”
Meeshaas ayuu ku dhamaaday khilaafkii reerka, Qurbacleyna lagu siiyay labo qurbac.
W/D: Ismaaciil Sheekh Khaliif (Abwaanka)